IShayina - IShayina, Shanghai, Hong Kong, Imfundo eShayina,
ⓘ IShayina - IShayina, Shanghai, Hong Kong, Imfundo eShayina, IsiShayina, Amazwe, Ubhubhane, Umthelela wegciwane le-COVID-19 esimeni semvelo ..
Shanghai amadolobha iShayina elikhulu. IShanghai ingomunye womasipala abane abaphethwe ngqo bePeoples Republic of China. Ingaphansi kokuphathwa okuqondile koMkhandlu Wombuso waseChina. Idolobha lisogwini oluseningizimu yeYangtze, noMfula iHuangpu ugeleza ngalo. Ngabantu abayizigidi ezingama-24.28 kusukela ngo-2019, iyindawo enabantu abaningi kakhulu emadolobheni aseChina futhi idolobha lesibili elinabantu abaningi emhlabeni. IShanghai iyisikhungo somhlaba wonke sezezimali, ucwaningo, ezobuchwepheshe, ezokukhiqiza nezokuthutha, kanti iPort of Shanghai iyichweba lamabhasi elixakeke kakhulu e ...
George W. Bush zibika iMelika ihoxa kwa-Anti-Ballistic Missile Treaty ngo-1972. Iphalamende weNdiya ihlasela; ibulala abantu 12. 3 ngoZibandlela – Iziphathimandla zibika isiboshwa weTaliban eMazari Sharif, i-Afghanistani nguJohn Walker Lindh, umuntu weMelika. 11 ngoZibandlela - Uhulumeni weMelika ubamba uZacarias Moussaoui ngenxa ya-Shaya 11 ngoMandulo. 13 ngoZibandlela 22 ngoZibandlela Ukundiza eiParisi–Miami, Florida iphambukisa ngo-Boston, Massachusetts emva kwamgibeli Richard Reid ushaya ngesicathulo. UHamid Karzai uba umongameli we-Afghanistani. 27 ngoZibandlela IShayina ikwazi ukuhwe ...
Hong Kong, eyayaziwa ngokomthetho ngokuthi Hong Kong Special Administrative Region of the People Republic of China, yidolobha ogwini oluseningizimu ye iShayina at the Pearl River Estuary kanye South China Sea. Hong Kong kahle eyaziwa for skyline yayo lubanzi, deep itheku yemvelo futhi extreme ukwanda kwabantu). The labantu lamanje Hong Kong liyizinsuku 93.6% ethnic Chinese. A ingxenye enkulu ye Hong Kong sika isiCanton abakhuluma iningi livela engumakhelwane Canton esifundazweni, kusukela lapho abasebenzi abanamakhono wabaleka emva uhulumeni zamaKhomanisi wathatha phezu China ngo-1949 futh ...
Imfundo eShayina iyinqubo yemfundo eqhutshwa wumbuso, kanti ingaphansi khwehhovisi likaNgqongqoshe wezeMfundo. Zonke izakhamizi kumele ziye esikoleni iminyaka eyisishagalolunye, eyeziwa njengemfundo ephoqelelayo, kanti futhi ithola imali evela kuhulumeni. Le nqubo ibandakanya iimfundo yeprayimari, eqala lapho izingane zineminyaka eyisithupha noma eyisikhombisa, kanye neminyaka emithathu yemfundo yezinga eliphansi lesekondari kwiminyaka engu 12 ukuya kwengu 15. Amanye amaprovinsi anemfundo yeprayimari yeminyaka emihlanu, kodwa iminyaka emine yenziwa esikoleni esiphakathi naphakathi. Ngemuva ...
Ubhubhane igama elisuselwa esiGrikhini, lichaza ukuqubuka kwesifo esithelelanayo esesihambe amazwe ahlukene nezindawo ezahlukene. Ukubhebhetheka ngokushesha kwesifo ebantwini abaningi abasendaweni eyodwa esikhathini esifishane kubizwa ngobhubhane lwendawana. Bese kuba khona isifo esithelele abantu abayisibalo esaziwayo, lolu akulona ubhubhane. Isifo esithelelanayo esinesibalo abathelelekile abaziwayo esifana nomkhuhlane wokushintsha kwezikhathi zonyaka azibalwa kubhubhane ngoba zivela ngesikhathi esisodwa ezindaweni ezahlukene emhlabeni kunokuthi zibhebhetheke emhlabeni wonke.
Umthelela wegciwane le-COVID-19 esimeni semvelo
Ukuvulwa kwezimboni ezikhipha umoya ofudumeza umhlaba kanye nezokuthutha kulinganiselwe nokuthi kube nomthelela wokunyuka komoya ofudumeza umhlaba kunokuthi kuwehlise emva kokuvalwa kwamazwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.